Ukukhetha okuhle okuhle kakhulu akulona umsebenzi olula. Okuningi kuncike ekuhlolweni okubanzi okwenziwe, 케파 ingxenye enkulu nayo ixhomeke kuwe-umsebenzisi. Wonke umuntu unezidingo ezahlukahlukene uma kuziwa ku Insiza ye-Virtual Private Network (VPN) futhi uyayithanda noma cha, akulula ukuthola eyodwa ehamba phambili kukho konke.
Kodwa-ke, ngokujwayelekile, ngidlule eziningi ze-VPN ngithole ukuthi kunamagama ambalwa amakhulu avele kaningi futhi alinganise kakhulu kakhulu kuzo zonke izigaba eziyinhloko. Lokhu kuhlanganisa ubumfihlo nokungaziwa, isivinini nokuzinza, amazinga amakhasimende, izici zobuchwepheshe kanye nokunye, izici ezengeziwe kanye nezinketho zamanani.
0.1 Ukuqhathaniswa kwamanani entengo ye-VPN engcono kakhulu nokubuyekezwa kwamasu (kubuyekezwe Mashi 2020)
1 Ama-Best 10 서비스 VPN WE-2020
1.1 I-1. I-NordVPN
1.2 I-3. ISurfshark
1.3 I-5. I-FastestVPN
1.4 Isici se-VPN Isici # 2- 우 쿠페 파
1.4.1 I-VPN Inconyelwe isivinini esingcono kakhulu :
1.5 Isici esiyisihluthulelo se-VPN # 4-스푸핑 Yendawo
1.5.1 I-P2P isevisi ye-VPN enobungane
1.6 Isici esiyisihluthulelo se-VPN # 6-서비스 아마 카 시멘 데
2 쿤 가니 이시카 티 Eside Se-VPN Kungenzeka Ungabi Isivumelwano Esihle
3 Amacala Osebenzisa i-VPN-쿠 가니 쿠파 넬레 우카 겔레 i-VPN?
3.1 1. I-VPN 에페 줄루 야 마비 지니시
3.2 3. I-VPN eshibhile 이지 흥고
3.3 5. I-VPN Yabasebenzisi be-Android
3.4 7. I-VPN yeDijithali Inkululeko
Ukuqhathaniswa kwamanani entengo ye-VPN engcono kakhulu nokubuyekezwa kwamasu (kubuyekezwe Mashi 2020)
Ngobuhle obujwayelekile cishe kuzo zonke izigaba, kukhona abahlinzeki abathathu be-VPN okufanele ubabheke ku-2020 : NordVPN, Surfshark, ne-ExpressVPN.
Inani Elihle kakhuluImithiIsivivinyo samahhala AmasevaUkusekela kwe-NetflixUkusekelwa kwe-P2PAmadivayisi
$ 3.49 / 월 이즈 쿠 30 3,000 + 5
$ 1.99 / 월 이즈 쿠 30 3,000 + 5
$ 7.99 / 월 이즈 누쿠 31 2,000 + 은곡 eng 세예 이즈 쿠 30 700 + 은곡 eng 세예 이즈 쿠쿠 7 1,100 + 은곡 eng 세예 이젤 루 레코 에질 루시 조 자마 -VPN 쇼핑객
I-1-NordVPN Manje isithengisiwe Enikeza Isaphulelo esingu-70 %-Chofoza Lapha Uku-oda (Isvivinyo Samahhala Sezinsuku Ezingama-30).
2- 운가 이카 이타 칸 자니 i-VPN? –
Izimo ezi-3 zokusetshenziswa ezihlukile ze-VPN yethu enconyiwe :
Ama-Best 10 서비스 VPN WE-2020
이진 즈조 ze-NordVPN
인 텐고 efinyelelekayo yesikhathi eside
Ihloniphekile futhi ifakiwe-egcwele
예 티카 엘리 엔 쿨루
iwebhusayithi : https://www.expressvpn.com/
I-ExpressVPN ingelinye lemikhiqizo ethembekile nehlonishwayo ebhizinisini le-VPN futhi empeleni, ngenye yezinketho zethu eziphambili. Ngokusekelwe e-Briteni Islands 제도, 인 콘조 야보 ithembekile, iphephile futhi izinzile.
ukusingatha amaseva angaphezu kwe-3,000 kumazwe we-94 emhlabeni wonke, inethiwekhi yayo eningi inikeza abasebenzisi cishe cishe noma yiliphi izwe iphuzu lokufinyelela okusheshayo. Uhlu lwamakhono abunikezayo lude futhi luvelele, kufaka phakathi ukubethela okuphezulu, ukufinyeleleka kokuqukethwe kumasevisi anqunyelwe nge-geolocation njenge-Netflix ne-BBC iPlayer nokusekelwa kwefayela le-P2P.
Yiqiniso, kune-ton yezinto ezengeziwe eziza nensizakalo ezenza kube inombolo eyodwa kulolu hlu.
Amanani aqala kusuka ku- $ 8.32 ngenyanga kuya phambili, 옹화 ngecala eliphakeme.
Funda kabanzi mayelana ne-ExpressVPN 에쿠 부예 케 제니 콰미.
I- 너희 ye-ExpressVPN
Ngikwazi ukuthola i-83 Mbps ngomzuzwana wokulanda ku-ExpressVPN. Lokhu Akuyona Njalo Indaba YeVPN 에지 닌가 나.
움푸 멜라 wokuhlolwa wejubane kusuka kuseva lase-US.
Inani Le-ping Kusuka Kuseva Lase 싱가포르 libonisa i-11 ms, ebheka njengekhwalithi enhle.
Umphumela Wokuhlolwa Okusheshayo Kusuka Kuseva Lase 싱가포르.
I-P2P 네 토렌트
Izinga zazibushelelezi ukuhamba. Ngicabanga ukuthi ukuhamba kwe-P2P kwakwazi ukuthola isivinini esingcono kunokujwayelekile.
이진 즈조 제
인 텐고에 쉐이와 칸지 마
우 쿠페 파 오 쿠페 줄루
이두 멜라 엘리 엘
iwebhusayithi : https://torguard.net/
Leli gama kungenzeka ukuthi alijwayele ngokweqile kwabaningi bakho, kodwa kungenzeka ngamangala njengoba uzizwa manje. Uma ubheka kuqala iklayenti leTorGuard lizobonakala lisesikoleni esidala futhi alikhonkothwanga emaphethelweni njengabathathu abaphambili kuhlu lwethu lwe-best VPN.
Noma kunjalo izinketho eziningi ezikhethiwe ezakhiwe enkonzweni kanye nokuvinjelwa kokuxhuma okumangalisayo kwenza lokhu kube okunye kokukhetha kwami ​​okuphezulu. Ikhono lokulungisa amazinga wokubethela kungenzeka kungabonakali njengomqondo omuhle kodwa kuvumela abasebenzisi ukuthi balinganise ukuphepha nokungaziwa ngokusho kwezidingo zabo.
I-TorGuard isiqala nokunikeza ukufinyelela ku-protocol ye-WireGuard elandelayo, okusho ukuthi ihlala emkhawulweni we-VPN.
Amanani aqala kusukela 응가 씨 $ 4.99 ngenyanga.
Funda kabanzi mayelana ne-TorGuard VPN kulokhu kubuyekezwa.
Isixhumanisi sidinga kancane 우쿠와 엘라
일링 가니 셀웨 칸칸 칸칸
이진 즈조 ze-FastestVPN
이반 베인 엘레나 만들라
이진 렐로 졸룽 콜라-에지 시빌 제시카 티
아이코 인쿰 보모 요 쿵나
우쿠 톨라 칼라 오 쿠페 줄루 녹쿠 풀라
이진 즈조 ze- 프라이빗 인터넷
Ihlanganisa okungeziwe okufana ne-adblocker ne-anti-malware
Ummeli we-SOCKS5 ufakiwe
쿨레 카쿨 루 ekusakazeni imidiya
이진 즈조 제 핫스팟 쉴드
Ukuzinikezela, Bukhoma ukusekelwa KWE-24 / 7 기술
Gcwalisa 우 분필로 쿠스 카 쿠발 링기
이시카 티 eside kakhulu sokuqinisekisa imali
이진 즈조 제 퓨어 VPN
아마 세바 오존 레디
Amaseva we-P2P 아지 니케 질
Amaseva alungiselelwe 우 쿠사카 자
이진 즈조 ze-VyprVPN
이세 켈웨 e 스위스
Ukufinyelela okuphelele ku-Netflix nokunye okuqukethwe okukhawulelwe indawo
Awekho amaseva anezinkampani zangaphandle
쿨 룰라 우 쿠세 벤 지사 울렐로 로쿠 세 벤자
이진 즈조 ze-IPVanish
Thola ukufinyelela kwezimali eziphansi ze-VOIP
Ivimbela ukuhlolwa kwepakethe ejulile
I-VPN enconyiwe ngokungaziwa kahle :
NordVPN – Njengoba isizinze ePanama, le nkampani i-VPN iwela ngaphansi kwelungelo lezwe (okwenzeka ukuthi lingabi kangako ngendlela yemithetho yokugcina imininingwane).
서프 샤크 – ISurfshark yamukela wonke amakhadi wesikweletu amakhulu wezinkokhelo (i-VISA, i-Master, i-AMEX, i-Discover) futhi inikeza izinketho ezahlukene zokukhokha ezingaziwa kubandakanya i-Bitcoin, GooglePay, ne-AliPay.
Isici se-VPN Isici # 2- 우 쿠페 파
Kusuka kuzivumelaniso ze- 암호화 ukuze zakhiwe izici zokuphepha zesoftware yamakhasimende, ama-VPN namuhla anikela ngokuphepha emazingeni amaningi. Kuliqiniso, okubaluleke kakhulu ukuphepha nobuqotho bokuxhuma obukugcinayo phakathi kwakho ne-Intanethi yize 쿤잘로.
Vsin banikeza inkinobho yokubulala의 Esinye isici esithi abahlinzeki abaningi basevisi. Lokhu kusho ukuthi noma nini ukuxhuma phakathi kwedivayisi yakho ne-VPN iseva iphukile noma ilahlekile nganoma yisiphi isizathu, iklayenti le-VPN lizovimba yonke idatha ekuphumeni noma ukungena kudivayisi yakho.
Ama-VPN abuye abe khona isikhathi eside ngokwanele ukuthi amanye amawebhusayithi noma ngisho nohulumeni banolwazi ekuqapheliseni umsebenzi we-VPN. Abahlinzeki bemisebenzi ye-VPN bayazi futhi baqalise isici esibizwa nge-Stealthing, Ghosting noma i-VPN 난독 화 (igama lamagama liyahluka, kodwa ngokuvamile lisho into efanayo). Lokhu kusiza ukudibanisa izinhlelo ezibheke ngabasebenzisi be-VPN.
Amanye ama-VPN ahamba ubude obukhulu ukusiza amakhasimende awo afihle ubunikazi bawo futhi avele nesici esabizwa i-VPN kabili noma i- 멀티 홉. Lokhu kusho ukuthi uxhuma kwiseva ye-VPN eyodwa bese ukuxhumana kuxhunyelwa kwenye iseva ye-VPN ngaphambi kokushaya i-Intanethi. Ngaphandle Kwendlela, ukubethela kuyaphindwa kabili futhi okungeza ungqimba olungaphezulu lokuphepha.
I-NordVPN isebenzisa ukubethela okuphindwe kabili ukuze iqinisekise ubumfihlo bezinga eliphakeme nokuphepha (funda kabanzi eyethu Ukubuyekezwa kwe-NordVPN).
Ngaphandle kwalokhu, izici ezengeziwe zengeziwe ezinsizakalweni eziningi ze-VPN sonke isikhathi njenge-scanware ye-Malware, ukuvinjelwa kwebhansela yewebhu nokuningi. Yize zonke lezi zikhona, Ungalokothi ukhohlwe Injongo eyinhloko-UGCINE UXhumano lwakho luvikelekile futhi lungaziwa.
I-VPN Inconyelwe isivinini esingcono kakhulu :
ExpressVPN – ukusingathwa kwamaseva angaphezu kuka-3,000 emazweni wonke angama-94 emhlabeni jikelele, inethiwekhi yayo ebanzi inikezela abasebenzisi abavela kunoma yiliphi izwe ukufinyelela kumaphoyinti okusheshayo ngokumangazayo.
우쿨로와 we 주반 르 익스프레스
Imiphumela ye-ExpressVPN 서버 및 네트워크 서버입니다. I-Ping = 11ms, 다운로드 = 95.05Mbps, ukulayishwa = 114.20Mbps (bheka ukubuyekezwa okugcwele kwe-ExpressVPN).
Umphumela wokuhlolwa ngesivinini se-ExpressVPN kusuka kuseva ye-Australia. I-Ping = 105ms, 다운로드 = 89.55Mbps, ukulayishwa = 38.76Mbps.
Isici esiyisihluthulelo se-VPN # 4-스푸핑 Yendawo
Khumbula ukuthi akuhlali njalo mayelana nesivinini, 케파 futhi nokutholakala. Uma ufuna ukusakaza okuqukethwe kwe-Netflix 미국 ngokwesibonelo, uzofuna i-VPN enamaseva kulelo lizwe. Ngokufanayo, e-UK uma ufuna ukusakaza okuqukethwe kwe-iBBC.
우마 우 코나 에즈 베니 엘리 보나 i- 인타 네티 카쿨 루, 노마 우 흐바 elin 엘리에, 중국, 중국, 퀴네 세 쿠스 우케 타이 비시 예에 -VPN enhle ekuzungezeni amabhulokhi. Kunzima kakhulu eChina ngoba cishe zonke izinto eziku-intanethi zicutshungulwa futhi zonke izinsiza ze-VPN ngaphandle kokusebenza kombuso noma ezivunyiwe zivinjelwe.
Ukunqoba lokhu, ezinye izinkampani ze-VPN zisebenzisa i 서버 난독 화 ezingasiza ekudluliseleni eminye imimhawulo ye-inthanethi efana nezicishamlilo zenethiwekhi. Lokhu kuqinisekisa ukuthi i-VPN yakho isebenza kulawo mazwe ngokucwaninga okuqinile.
I-P2P isevisi ye-VPN enobungane
I-TorGuard – Izingcingo zejubane ezihamba phambili,이나 니 엘리 쿠루, nokuzungeza okufudlana kwama-ISP amaningi.
Isici esiyisihluthulelo se-VPN # 6-서비스 아마 카 시멘 데
I-TorGuard-enye yezinsizakalo ze-VPN ezisekelwa kakhulu, isebenza iforamu yokusekela abasebenzisi bayo (funda kabanzi ngaphakathi Ukubuyekezwa kukaTimothy iTorGuard).
Njenganoma iyiphi imboni, umphakathi we-VPN Unenja eziphezulu nezinja eziphansi kumsebenzi wamakhasimende. ngiqambe igama labo abalapha, kodwa qiniseka ukuthi ngizozibiza ngalokhu ku-VPN 이즈이 부 케케 응가 바니에.
ukgcizelela kuyo ukuthi ngensizakalo enobuchwepheshe bemvelo njenge-VPN에, asikho isizathu esizwakalayo sokuthola inkampani enamakhono ayo okuthi inganikeli ukusekelwa okuhle kwamakhasimende. Kudingekile. Uma ubhalisela insizakalo ye-VPN, Qiniseka ukuthi uhamba ngezibuyekezo ezithile ukubona ukuthi 젠자 칸 자니 ukwesekwa kwamakhasimende.
Ukuthi abanye bathembela ohlelweni lokuthengiswa kubi ngokwanele, kodwa 방가 마네 baphendule. Ungacabanga uhleli ekhaya futhi ukhathazeka ngokwengeziwe njengoba i-imeyili ngayinye ibuyela kuwe ngemuva kosuku noma ezimbili-khumbula, ukhokhela ilungelo lokusebenzisa inkonzo yabo.
쿤 가니 이시카 티 Eside Se-VPN Kungenzeka Ungabi Isivumelwano Esihle
Abanye abahlinzeka ngezinsizakalo ze-VPN banomqondo wokuhlinzeka nge-‘impilo yesikhathi esizayo ‘ngezinsizakalo zabo. Ngenkathi lokhu kungazwakala njengokutshontsha kwakho okucabanga i-VPN yempilo yonke mhlawumbe nge- $ 100-yima ukuyicabangela kuqala.
Ama-VPN ngokwemvelo yawo adinga ukuthi izinkampani zenze isamba esikhulu semali ekuthuthukisweni komkhiqizo, i-hardware, ingqalasizinda, nezinye izindleko. Uma bezothatha imali yakho kanye futhi bakunikeze impilo yokusebenza-kwenzekani lapho lelo chibi lezimali liqala ukoma?
Yicabange njengesikimu se-ponzi, lapho insizakalo yakho isekelwa khona ngababhalisile abasha kuhlelo. Lapho isikimu siba nzima kakhulu ukuthi imali entsha ingasekelwa, iyawa. Ezinhlelweni zezezimali ze-ponzi ezizoholela ekulahlekelweni이지 말리.
Ku-VPN akusikho lokho kusobala. Ungaqaphela izimpawu ngaphandle kokuthi insizakalo iphume ngebhizinisi. Ijubane Elithambile, Ubunzima Bobokhuhuma, Futhi Okubi Kunakho Konke-Izihibe Zokuphepha Ezingaba Khona ezibangelwa Insizakalo Nokusekelwa Okunganele.
Ngenye indlela, umhlinzeki wesevisi angaxhasa imali ayitholayo ngokuthengisa idatha yakho, ebi kakhulu kunokunikezela ngezinsizakalo ezingezansi. Ngakho-ke ngaphambi kokuthi ushaye phansi ikhadi lakho lesikweletu ngecebo lokuphila konke, cabanga ngengozi engaba khona engahle ivele ohlelweni olunjalo. Akekho ongakwazi 우쿠 니케 자 인도 마할 라.
Amacala Osebenzisa i-VPN-쿠 가니 쿠파 넬레 우카 겔레 i-VPN?
1. I-VPN 에페 줄루 야 마비 지니시
I-VPN Enconyelwe abafundi : NordVPN (15 % 이스 풀 엘로 사바 푼디)
손케 라포 시코 나 옌 가바 펀디; ihlala imfishane ngokheshi futhi ingena enkingeni. Ngenxa yokuqhuma kwemidiya yedijithali neyenhlalo, ukuphepha nobumfihlo enetheni sekuyisidingo esiphuthumayo kakhulu sabafundi emhlabeni jikelele.
Yize ezimweni eziningi abafundi bebekhetha ukuthola insizakalo eshibhile, kungani ukhokhela leyo mali ngedola elingaphezulu kwelinye ongayithenga kwelinye lagayVheng amahle kakhulu emakethe. I-NordVPN ifanela lesi sigaba kahle futhi ngamanani eceleni, 이니 케자 아바 펀디 이시 세하 세지시 에징 게지.
Izinhlelo zokusebenza zabo zeselula nezandiso zesiphequluli nazo zibenza balungele abafundi abasendleleni, okuvumela ukusebenza okuphephile kumalaptop abo kanye nama- 스마트 폰 노마 kuphi ekhampasi.
3. I-VPN eshibhile 이지 흥고
I-VPN enconyelwe ukuvulwa : ExpressVPN, NordVPN
Ezinye izinsizakalo zokusakazwa kwemidiya zikhawulela okuqukethwe kususelwa kundawo ngenxa yezici ezahlukahlukene ezinjengemithetho eqondene nezwe, imithetho yokuvikela, noma izivumelwano zelayisense. Lokhu kufaka phakathi I-iPlayer ye-BBC futhi Netflix. Ukuze uzungeze lokhu, isevisi ye-VPN isiza kodwa hhayi nje noma yimuphi u-VPN oyokwenza.
Amanye ama-VPN angcono kuwo kunabanye, ngoba iningi lithembele ezindaweni zeseva. Okungcono kakhulu kuzokushintshanisa ngokuzenzakalelayo i-IPs yeseva futhi kufeze imisebenzi emhlophe kuma IPs avinjelwe ngaphambilini. Eqinisweni, ezinye ze-VPN ziyazi ukuthi azikwazi ukusekela i-Netflix futhi zisho ngokuthembeka ukuthi azikwazi ngemigomo yazo yesevisi.
Ngamakhono ayo wejubane elihle kakhulu nebanga lenethiwekhi ebanzi kakhulu, i-ExpressVPN ne-NordVPN cishe yizo ezimbili ezihamba phambili ebhizinisini lokusakaza imithombo yezindaba ezivela emithonjeni eminingi-hhayphei 인터넷 연결 Ijubane layo lingabambelela kalula kuvidiyo ye-HD futhi i-Netflix isesigabeni esiphezulu sohlu lwabantu ‘abalifunayo’.
5. I-VPN Yabasebenzisi be-Android
I-VPN enconyiwe yokuqothula : ExpressVPN, I-TorGuard
Abanye bakho kungenzeka ukuthi bake bezwa ukuthi ama-VPN enza i-P2P ikwabelana ngamafayela (iTorrenting) ngokushesha kepha lokho akulona iqiniso ngokuphelele. Yini iqiniso nokho ukuthi ukufukulula kwamanye amazwe kungakwenza ushaywe ngenhlawulo enkulu noma nesikhathi sasejele uma ubanjwa uhambisa izinto ezingafanele.
Ezimweni eziningi kukhona nabanikezeli bezinsizakalo ze-Intanethi abagasele ngokugcwala imifula njengoba bethi abahlanganyeli befayela leP2P badla iningi le-bandwidth etholakalayo. Lokhu kuvame ukuholela ekunciphiseni, we 루즈 이부 반 라베이스 벤지시 be-P2P.
I-VPN enhle-efana neTorGuard, izokusiza ukuthi uzungeze izifufula ngalezi zi-ISP. Eqinisweni, uma usebenzisa i-VPN ukukhipha amandla, i-ISP yakho ngeke yazi nokuthi uyifufula.
7. I-VPN yeDijithali Inkululeko
우쿠 톨라 우 쿠달 룰와
Sisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo kulesi sihloko. I-WHSR ithola izimali zokudluliselwa ezinkampanini ezikhulunywe kulesi sihloko. Imibono Yethisekelwe ekuhlangenwe 나호 kwangempela kanye nedatha yangempela yevava.